Adora & etc.: ၄၉ ရက်
ကိုရီးယားကား ကြည့်ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းလောက်ကစပြီး ကိုရီးယားဇာတ်ကားတွေ ခေတ်စားလာလိုက်တာ ဒီနေ့ထိပါပဲ။ ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ကွက်၊ ဇာတ် အလှည့်အပြောင်း၊ ဟာသ၊ မင်းသား မင်းသမီးတွေရဲ့ ရုပ်ရည် ကြောင့် စွဲလမ်းကြသူတွေ ရှိသလို တချို့ကလဲ ကိုရီးယားကား ကြည့်ရရင် စိတ်ဖိစီးမှူပျောက်ပြီး စိတ်အပန်းပြေတယ် လို့ ပြောတဲ့သူတွေတောင် တွေ့ဖူးပါတယ်။ ကျွန်မထင်တာကတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ မျောပြီး ကိုယ့်အပူကိုယ် ခဏမေ့သွားတာ ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တချို့ဟာသကားလေးတွေကတော့ စိတ်အပန်းပြေစေတာအမှန်ပါပဲ။
ကိုယ်ကိုတိုင် ကိုရီးယား ဒရာမာတွေ တစိုက်မတ်မတ် ကြည့်ရအောင် မစွဲလန်းပေမဲ့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့မင်းသား၊ မင်းသမီး ပါတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဖြစ်ရပ်မှန် သမိုင်းအကြောင်းရိုက်တာမျိုးဆိုရင်တော့ အချိန်ပေးပြီးကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်းတွေသိပ်မများရင်ပေါ့လေ။ စကားကြုံလို့ပြောရရင် ပြီးခဲ့တဲ့ ၁လလောက် သူငယ်ချင်းတယောက်ပြောလို့ Gentleman's Dignity ဆိုတဲ့ ကားလေးကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုအရင် ကိုရီးယားကားတွေ ခေတ်စားခါစ All about Eve ကားထဲက ဒါရိုက်တာရင်ကို မှတ်မိတယ်ဆိုရင်၊ ကြိုက်တယ်ဆိုရင် ကြည့်ဖို့ ညွှန်းချင်ပါတယ်။ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ကားလေးပါ။ စကားတွေချီးနေတာနဲ့ပဲ ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းမရောက် ဖြစ်တော့မယ်။
"၄၉ ရက်" ဆိုတဲ့ နာမည်ခပ်ဆန်းဆန်းနဲ့ ကားလေးပါ။
ဒီဇာတ်လမ်းကြည့်မဲ့သူတွေ အတွက်လဲ အနှောက်အယှက် မဖြစ်အောင် ဇာတ်လမ်းကိုအကျဉ်းချုံး ပြောရရင် ရုပ်ရှိ ရေလျှံ သတို့သမီးလောင်းလေး ကားတိုက်မှုဖြစ်ပြီး ကိုမာ ရသွားတာကနေ စပါတယ်။ လူက ဆေးရုံကုတင်ပေါ်မှာ မလှုပ်မရှက်ပေမဲ့ သူ့ရဲ့ ဝိညဉ်ကတော့ မြန်မာလိုအခေါ်ဆို ယမမင်းဖြစ်မလားမသိ၊ ဒရာမာထဲမှာတော့ Scheduler လို့ခေါ်တဲ့ မင်းသားငယ်ငယ်ချောချောလေးနဲ့တွေ့နေပါတယ်။ Scheduler ရဲ့ တာဝန်က သေရမဲ့သူတွေ သေချိန်တန် သေမသေ စောင့်ကြည့်၊ စောင့်ခေါ်ရတာပါပဲ။ ဒီကြားထဲ သတို့သမီးလောင်းလေးလို သေချိန်မတန်ဘဲ အကုသိုလ်ဝင်ပြီး အပေါ်တက်မရ၊ အောက်လဲဆင်းမရဘဲ.. လူ့ဘဝထဲလဲပြန်သွားလို့မရတဲ့ သူတွေကို ကူညီရတာပါ။ လူ့ဘဝထဲပြန်သွားဖို့ သန့်ရှင်းတဲ့ မျက်ရည် ၃စက်လို ပါတယ်။ သန့်ရှင်းတဲ့ မျက်ရည်ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့စိတ် တခုထဲအတွက်ကြောင့်ကြတဲ့ မျက်ရည်ပါ။
"လူ့ဘဝထဲမှာ ဒီအသက်အရွယ် အထိနေလာပြီး ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့သူမှ မရှိရင် ဘာလို့ လူ့ဘဝမှာ ဆက်နေအုံးမလဲ"
"မိမိကိုယ်သာ အားကိုးရာ"၊ " ကိုယ်ကိုတိုင်အတွက် အသက်ရှင်ပါ" ဆိုပေမဲ့ တယောက်ထဲနေလို့မရတဲ့ လောကကြီးမှာ ကိုယ့်အပေါ်တကယ် စစ်မှန်တဲ့၊ ကိုယ့်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့ အဖော်ကောင်း မိတ်ဆွေကောင်းတကယ်လိုပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် အသက်ရှင်ပြီး တယောက်ထဲအထီးကျန်နေမယ်ဆိုရင် အသက်ရှင်ပေမဲ့ ပျော်စရာကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်။
နောက်ထပ် ကျွန်မကို အတွေးပွါးစေတာက ဇာတ်လမ်းထဲက မင်းသားတယောက်ရဲ့ စကားပါ။ ကိုရီးယားဒရာမာတို့ ထုံးစံ ဗီလိန်နေရာမှာ သရုပ်ဆောင်တဲ့ မင်းသားက တခြားတယောက်ကို သူ့လုပ်ရပ်နဲ့ပက်သက်ပြီး ချေပတာဆိုပါတော့။
" ငါ ကံမကောင်းခဲ့ ဆင်းရဲခဲ့တုံးက ငါဘယ်သူ့ကို အပြစ်တင်လို့ရခဲ့လို့လဲ"
" ငါဘာမှ အမှားမလုပ်ဘဲ ဘာလို့ ခက်ခဲတဲ့ ဘဝမျိုး ကြုံရသလဲ "
" အခုလဲ ဒီလိုပါပဲ... သူတို့ဘာအပြစ်မှ ကျူးလွန်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ ငါနဲ့တွေ့ရတာ ကံဆိုးသွားတာပါ"
လူတယောက်၊ မိသားစု တခုကို ပျက်စီးရာ ပျက်စီးကြောင်း ကြံစည်တာ မှားတယ် ဆိုပေမဲ့ သူပြောတာကို ခံစားပေးလို့ရပါတယ်။ ဒီလိုရေးလို့ ကိုယ်ကံဆိုးတိုင်း မဆိုင်တဲ့သူကို တိုက်ခိုက်ရမလား ဆိုတော့လဲ မဟုပ်ပါဘူး။ တခါ တခါ လူတွေငြီးကြသလို ဘဝကြီးက မတရားဘူး မဟုတ်လား?
သရုပ်ဆောင် ၂ယောက်လမ်းခွဲ ခါနီးပြောတဲ့ စကားကလဲ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။
ကောင်မလေးက မေးတယ်။ "ကျွန်မမှာ ဘာအပြစ်ရှိလို့လဲ"
"ဘာအပြစ်မှ ရှိလို့မဟုတ်ပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁နှစ် အတွင်း မင်းနဲ့ငါရဲ့ ဆက်ဆံရေးက ချစ်သူတွေဆိုတာထက် အကျိုးတူစီးပွါးဖက်တွေနဲ့ ပိုတူတယ်။ တွေ့လိုက်တိုင်း စီးပွါးရေးကိစ္စတွေ ဆွေးနွေးရင် ဆွေးနွေး ဒါမှမဟုတ် ဘာဆက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်တွေလုပ်နဲ့ ။ ဒါကြောင့် တခြားတယောက်ကို ငါစိတ်ဝင်စားသွားတာ "
ဒီအခန်းကို ကြည့်ရင်း လွန်ခဲ့တဲ့ ၃-၄ နှစ်က ဖတ်ဖူးတဲ့ စာရေးဆရာမ Sherry Agov's ရဲ့ "Doormat to Dreamgirl" ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ ရေးထားတာကို သတိရသွားတယ်။ "ချစ်သူရည်းစားဆိုတာ ချစ်သူရည်းစားလိုပဲ နေသင့်တယ်"တဲ့။ အရမ်းရင်းနှီးပြီး လင်မယားလို ဖြစ်သွားရင်မကောင်း သလို၊ အုပ်ရောရော ကျောက်ရောရောနဲ့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေလိုဖြစ်သွားလဲ မကောင်းဘဲ အမျိုးသားတွေဘက်က စိတ်ဝင်စားမှု ရော့တတ်တယ်" တဲ့။ မှန်မမှန်တော့ အမျိုးသားတွေမှပဲ သိနိုင်မှာပါ။ ကျွန်မအနေနဲ့ပြောရရင်တော့ မိန်းကလေးတွေက ရင်းနှီးလာတာနဲ့အမျှ ပိုပြီးသံယောဇဉ်တွယ်လာတတ်တာမျိုးပါ။
နောက်ဆုံး စိတ်ထဲရောက်လာတာ တခုကတော့ ကိုမာ ရပြီး မျက်ရည်လိုက်စုနေတဲ့ မင်းသမီးလေးပြောတဲ့စကားပါ။ သူက
" ဘယ်သူတွေ ကျွန်မအတွက် ငိုသလဲ ဆိုတာ မသိချင်ပါဘူး။ သိနေရင် လူတွေအပေါ် မမျှမတ ဆက်ဆံမိမှာ စိုးရိမ်လို့ပါ"
နီးစပ်ရာ ကိုယ်နဲ့အလှင်းသင့်တဲ့သူတွေ၊ ကိုယ့်အပေါ် အကျိုးပြူတဲ့ သူတွေကိုပဲ ဦးစားပေး အသာပေးနေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးထားတတ်တဲ့ သူအချိုး အခုထက် နဲနဲများ ပိုများလာရင် လောကကြီး တော်တော်သာယာလာမှာပါ။
ဒီဇာတ်လမ်းကို ကြည့်ကြမဲ့သူတွေအတွက် အသေးစိတ်မရေးတော့ပါဘူး။ အချိန်ရလို့ အားကြမယ်ဆိုရင်တော့ ကြည့်ဖို့ ညွှန်းချင်ပါတယ်။
Posted by Adora etc. at 05:26
Labels: Feeling.etc, Movie.etc